क्वारेन्टिन र आइसोलेसनको उत्पादनः थकान, तनाव, चिन्ता र रिस - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
गृहपृष्ठ ∕ विशेष रिपोर्ट ∕ क्वारेन्टिन र आइसोलेसनको उत्पादनः थकान, तनाव, चिन्ता र रिस
क्वारेन्टिन र आइसोलेसनको उत्पादनः थकान, तनाव, चिन्ता र रिस
न्यूनतम सुविधा विनाका क्वारेन्टिन र आइसोलेसनहरूले व्यक्तिको मानसिक स्वास्थ्य बर्बाद बनाएका छन् । यस्ता क्वारेन्टिनमा बसेकै बेला केहीले आत्महत्या समेत गरेका छन् । विशेषज्ञका भनाइमा, ‘समाजमा मानसिक रोग बोकेर बाँच्नेहरूको संख्या बढ्दो छ ।’
वसन्तप्रताप सिंह, कृष्ण अधिकारी, लक्ष्मी बस्नेत र विद्या राई, खोज पत्रकारिता केन्द्र बिहीबार, २०७७ साउन १५ गते, १४:०१ मा प्रकाशित
काठमाडौँको सिभिल मल सञ्चालकले लकडाउनको समयमा पसल बन्द भएका बेलाको पनि भाडा तिर्नुपर्छ भनेपछि ‘आत्महत्या गर्न बाध्य नपार’ भनेर २६ असार २०७७ मा प्रर्दशन गर्दै ब्यापारीहरु । तस्बिरः सुवास श्रेष्ठ
बझाङ/ नेपालगञ्ज/काठमाडौं – क्वारेन्टिनमा बसेका व्यक्तिले आत्महत्या गरेका धेरै उदाहरण छन् । ७ असार २०७७ राति सुदूरपश्चिम प्रदेशको बझाङ जिल्लाको छविस पाथीभेरा गाउँपालिका वडा नं ७ मझखोरी माध्यमिक विद्यालयमा रहेको क्वारेन्टिनमा एक ३० वर्षीय पुरुषले आत्महत्या गरेका थिए । तीन दिनअघि मात्रै भारतबाट फर्केर उनी स्थानीय उमेश बोहरा र जनक बोहरासँगै सो क्वारेन्टिनमा बसेका थिए ।
त्यसैगरी, अर्घाखाँचीको शितगंगा–५ मा ४५ वर्षीय युवा, रोल्पाको गंगादेव गाउँपालिका ५ का ३१ वर्षीय युवा र तनहुँको घिरिड गाउँपालिका वडा नम्बर ३ का एक ४९ वर्षीय पुरुषले पनि आत्महत्या गरेका छन् । उनीहरू तीनै जनाको आत्महत्या प्रकृति समान छ । विदेशबाट घर फर्किएर क्वारेन्टिनमा बसेका वेला कोरोना पोजेटिभ देखिएपछि मानसिक विचलनले आत्महत्या गरेको देखिन्छ ।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता डा.दिव्या दवाडी स्कूल भवनको संरचना नै क्वारेन्टिन बनाउन उपयुक्त नभएकाले बलात्कार, चोरी, आत्महत्या जस्ता घटना भएको बताउँछिन् । दवाडी भन्छिन्, “स्कूल भवन दिउँसोको समयमा पढ्ने-पढाउने कामका लागि बनाइएको हो । क्वारेन्टिन बनाउन होइन ।” डा. दवाडीका भनाइमा, स्कूल भवनलाई क्वारेन्टिन बनाइएका कारण पनि महिला र बालबालिका असुरक्षित भएका हुन् । कतिपय भुक्तभोगीहरूका भनाइमा संरचना मात्रै अव्यवस्थित होइन, व्यवस्थापनमा खटिएका व्यक्तिको व्यवहार पनि मानवीय थिएन । त्यसले क्वारेन्टिनमा बस्नेहरूलाई थप बेचैन बनाउँथ्यो । केही माग्यो भने ‘खान बस्न पाएकै छौ कति किचकिच गरेको’ भनेर खप्की खानुपथ्र्यो ।
विशेषज्ञका अनुसार क्वारेन्टिनमा बसेका वेला अरू वेला भन्दा भिन्नै सोचाइ आउँछ । घाँटी खसखस ग¥यो वा सामान्य रुघा–खोकी लाग्यो भने पनि ‘लौ मलाई त
कोरोना नै भयो कि के हो’ भन्ने सोच आउँछ । त्यसमाथि लकडाउनका कारण रोजगारी गुम्दा अब के खाने के खुवाउने भन्ने सोचेर पनि धेरै तनावमा हुन्छन् । उनीहरूमध्ये केही त आत्महत्या गर्ने तहसम्म पुग्छन् । मनोविद् डा.नरेन्द्रसिंह ठगुन्ना भन्छन्, “आत्महत्या गर्नेहरूको आर्थिक, पारिवारिक पृष्ठभूमि र अवस्था नियाल्ने हो भने यो स्पष्ट हुन्छ ।”
गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय आपत्कालीन सेवा केन्द्रका अनुसार जेठ मसान्तसम्म एक लाख ३८ हजार व्यक्ति क्वारेन्टिनमा बसेका थिए । त्यसपछि यो संख्या क्रमशः घट्दै गएको छ । यीमध्ये ३३ हजार ७३७ महिला र चार हजार ६७७ बालबालिका थिए । यो अवधिमा २६७ गर्भवती महिला क्वारेन्टिनमा बसेका थिए । जेठ मसान्तसम्म मुलुकभर सात हजार ११० क्वारेन्टिन सञ्चालनमा थिए ।
मनोचिकित्सकहरूका अनुसार, कोरोना त्रासका असर पनि उमेर समूह अनुसार फरक-फरक हुने गरेको छ । जस्तो कि अहिले बालबालिकामा निद्रा नलाग्ने र अरू उमेरजन्य गतिविधि नगर्ने समस्याहरू देखिन थालेका छन् । ‘हेर्दा बालबालिकामा पेट दुख्ने समस्या देखिने तर त्यो मानसिक स्वास्थ्य समस्या हुने गरेको’ चिकित्सकहरूको भनाइ छ । मनोचिकित्सक डा.पवन शर्माका अनुसार चाहिं, लकडाउनको अवधिमा बालबालिकामा एञ्जाइटी (मनोत्रास), कन्भर्जन डिस्अर्डर र एडजस्टमेन्ट डिस्अर्डर जस्ता समस्या देखिन थालेका छन् ।
उनी भन्छन्, “लकडाउन यता मानसिक स्वास्थ्य समस्या बढेको छ । आर्थिक संकटले मानिसलाई तनाव निम्त्याएको छ । प्रहरीका अनुसार लकडाउनका तीन महीनामा आत्महत्या गर्नेको संख्या १८०० बढी भयो । यो ज्यादै गम्भीर अवस्था हो ।”
त्यसैगरी, मानसिक स्वास्थ्यमा समस्या भएका व्यक्तिका लागि गाउँ र नगरपालिकाहरूमा रहेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मार्फत उपलब्ध हुँदै आएको औषधि लकडाउनका कारण उपलब्ध हुन नसकेपछि पनि समस्या थपिएको छ । मुलुकका थोरै गाउँ र नगरपालिकाले मात्रै यो संकटमा पनि दीर्घ रोगीहरूका लागि घरघरमै औषधि पु¥याउने काम गरेका थिए ।
तर मनोविद डा.नरेन्द्रसिंह ठगुन्ना कारणहरू जे–सुकै भए पनि आत्महत्याका घटना कम गर्न तत्काल मानसिक स्वास्थ्य साक्षरताको अभियान शुरू गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “सामुदायिक स्तरमा मानसिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्नुपर्छ । मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ र थप हेल्पलाइन सेवाहरू प्रभावकारी नबनाई हुँदैन ।”
-प्रा.डा. सरोजप्रसाद वझा,
प्रमुख, मानसिक विभाग, त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान
मनोसामाजिक परामर्श चाहिन्छ भनेर अरूको सैद्धान्तिक पक्ष नक्कल गर्न त सजिलो भयो । तर व्यवहारमा हामी चुक्यौं । क्वारेन्टिनमा बस्नेहरूलाई शुरूमै सामाजिक दूरी र त्यहाँको वस्तुस्थिति बुझाउन सक्नुपर्छकि । किन त्यहाँ आएको व्यक्तिले आधारभूत सुविधा पनि नहोला भनेर कल्पना गर्न सक्दैन । तर, हाम्रा क्वारेन्टिन त कोभिड—१९ फैलने स्थान बने । त्यसले मानिसमा क्वारेन्टिनभित्र नै संक्रमणको डर भयो । अनि डराउने, भाग्ने, झगडा गर्ने जस्ता घटना भए ।
हामीले के बुझ्नु आवश्यक छ भने क्वारेन्टिन जेल होइन । कम्तीमा त्यहाँ आधारभूत आवश्यकताका सुविधाहरू हुनुपर्छ । सामाजिक दूरी कायम राख्ने ठाउँ हुनुपर्छ । समयमा सुत्ने, समयमा उठ्ने, उठेपछि व्यायाम र योगहरू गराउने वातावरण हुनुपर्छ । केही न केहीमा ‘इन्गेज’ गराउने वातावरण बनाउनुपर्छ । हामीले आफू, आफ्नो परिवार र समाजलाई सुरक्षित बनाउन क्वारेन्टिनमा बस्नु परेको हो भनेर बुझाउनुपर्छ । सबभन्दा ठूलो स्वास्थ्य हो । दुई हप्ता अनुशासित रूपमा बस्यो भने म र मेरो परिवार अनि समाजमा यो रोग फैलन नपाउने रहेछ भन्ने ज्ञान दिनुप¥यो । यति सिकाउन सकियो भने जो कोही मान्छे अनुशासित भइहाल्छ नि !
-खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि